होक्स मार्केटिंग? Ivar को अंडरिया बिलबोर्ड | Martech Zone
यूट्यूबका अनुसार, हरेक मिनेटमा hours२ घण्टा भिडियो अपलोड हुन्छ! ट्विटर प्रयोगकर्ता ट्वीट Millions०० लाख पटक प्रति दिन। हल्लाले भरिएको संसारमा, यो उत्पादन, वेबसाइट, वा सेवाको लागि सुन्नको लागि गाह्रो छ। यो अझ गाह्रो हुन्छ जब त्यहाँ वस्तुको विपणनको बारेमा साँच्चिकै अपवाद छैन। प्रत्येक दिन, बजारहरूले आवाजबाट माथि उठ्नको चुनौतीको सामना गर्छन्। रचनात्मक उत्तेजनाको आशामा, म २०० to मा फर्कन्छ र अन्डरसिया बिलबोर्ड होक्सले गर्दा उत्पन्न हुन्छ Ivar समुद्री खाना श्रृंखला सिएटल, वाशिंगटन मा।
Ivar रचनात्मक मार्केटिंग को इतिहास
इभर्सको स्थापना सियाटलका लोक गायक इवार हागलुनद्वारा गरिएको थियो जसले शहरको पहिलो एक्वेरियम निर्माण गरे। रेष्टुरेन्ट स्थापना गरिएको थियो किनभने इभारले एक्वैरियम समुद्री खानाका आगन्तुकहरूलाई खुवाउनु बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने सोचेको थियो। उनले आफ्ना रेस्टुरेन्टहरूलाई असामान्य स्टिलि gaveहरू दिए, जुन भारतीय लhouse्गहाउस पछाडि उसको एक स्थानको मोडेलि .्ग गर्‍यो। दशकौंसम्म, उनले एक स्थानीय आतिशबाजी दर्शक प्रायोजित, हरेक गर्मीमा ,300,000००,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई रेखाचित्र। क्षेत्र मा, Ivar Haglund केहि लीजेन्ड थियो।
इभर्सले १ 1950 s० को दशकदेखि कागजातहरू पत्ता लगाएर घोषणा गरे कि रेष्टुरेन्टका संस्थापक, पुगेट साउन्डमा डुबेको बिलबोर्डमा नक्शा उपलब्ध गराउँदै भूमिगत बिलबोर्ड अभियान सुरु भयो। मानौं कि, हाग्लन्डले भविष्यको कल्पना गर्‍यो जहाँ उपभोक्ताहरू व्यक्तिगत पानीमुनि पनडुब्बीहरू ड्राइभ गरिरहेका छन् र उनले यस पनडुब्बी-ड्राइभि dem डेमोग्राफिकको विज्ञापनलाई बढावा दिन साउन्डमा बिलबोर्ड राखेका थिए। त्यसोभए, समाचारले विच्छेद गरे कि नाविकहरूले यी मध्ये एक प्रामाणिक बिलबोर्ड विज्ञापनहरू पगेट ध्वनिको तलबाट फेला पारेका छन्। बरामद काठको बिलबोर्डले केवल m 75 सेन्टको लागि क्लैम चाउडरको कचौराको विज्ञापन गर्‍यो र वेन्टेड पेन्ट र बार्न्कलहरूले सजाएको थियो। अन्य बिलबोर्डहरू पनि पुनः प्राप्त गरियो।
यदि बिलबोर्डहरूको सर्त उनीहरूको केही प्रामाणिकतालाई विश्वस्त पार्न पर्याप्त थिएन भने, सियाटल क्षेत्रका एक प्रतिष्ठित इतिहासकारले यी निष्कर्षहरूको पुष्टि गर्न अघि बढे। वाशिंगटन राज्यका इतिहासकार र त्यस शहरका चर्चित अखबारका स्तम्भकार, पॉल डोरपतले कागजातहरू सत्य छन् भनेर पुष्टि गर्दै एक बयान दिएर आफ्नो नाम मिसिदिए। ध्यानपूर्वक योजना बनाएको रोपण र नक्कली पानी लगाएको बिलबोर्डहरूको खोजीको साथसाथै उनको विश्वस्त राय जनतालाई होल्डिंग वास्तविक हो भन्ने कुरा मनाउन पर्याप्त थियो। आविष्कारको सम्झना गर्न, इभारले यसको क्लैम चाउडरको मूल्य प्रति बाउल 75 c सेन्टसम्म कम गर्‍यो - विज्ञापनमा देखाइएको समान मूल्य।
इवारको अभिप्राय विज्ञापन प्रोन्नति समाप्त नभएसम्म चकराइ राख्नको लागि थियो, तर अभियानले अग्रणी रेस्टुरेन्ट प्रकाशनको सूचनालाई पक्रिएपछि पा the्ग्राहरू बन्द हुन थाले। कथामा टिप्पणीको लागि सोध्दा डोनेगनले स्वीकार गरे कि यो खोज ए भाइरल मार्केटि campaign अभियान जुन अपेक्षाबाट अलि राम्रो भयो। यस प्रवेश पछि, जनताका केहि सदस्यहरूले इभोरको कर्पोरेट अधिकारीहरू होर्डो लगाउने र जनतालाई धोका दिने आरोपमा निन्दा गर्न थाले। वाशिंगटन राज्यका इतिहासकार पॉल डोरपतलाई पनि स्टन्टसँग खेल्न सार्वजनिक गर्मी प्राप्त भयो।
कसरी स्टन्ट कम्पनीको तल लाइन लाई प्रभावित
क्षणिकको बाबजुद नराम्रो प्रचार, यो रचनात्मक मार्केटिंग अभियान सफल भयो! बिलबोर्ड अभियानको क्रममा, इभाराको क्ल्याम चाउडरको बिक्री बढ्यो 400 प्रतिशत भन्दा बढीअघिल्लो वर्षको तुलनामा 60,000०,००० भन्दा बढी बिक्रीमा जम्पि।। यस लेखबाट प्रमाणित भएपछि, मानिसहरूले यस रचनात्मक मार्केटिंग अभियानलाई सम्झन्छन् र अझै पनि यसको बारेमा कुरा गर्छन्। एउटा गुगल खोजी Ivar को अंडरिया बिलबोर्ड होक्स 360,000 XNUMX०,००० भन्दा बढी परिणामहरू फर्काउँछ।
स्पष्ट रूपमा, योजना र कार्यान्वयनको एक राम्रो सम्झौता Ivar को अन्डरसिया होर्डिंगहरू सफल बनाउन सफल भयो। तपाइँको बारेमा सोच्नको लागि तल कुञ्जी टेकवेहरू छन्:
त्यहाँ शारीरिक कलाकृतिहरू थिए जसले शारीरिक कलाकृतिहरू फेला परेको कारण फोटो र भिडियोहरू कब्जा गर्न अनुमति दिए।
यो कहानी एक विश्वसनीय र स्थानीय इतिहासकार द्वारा समर्थित थियो।
कम्पनी तयार गरीयो र स्वतन्त्र प्रचारमा क्यापिटलाइज गरिएको थियो पैसा खर्च गरेर पागल कथा र कम क्लेम चाउडर मूल्यको विज्ञापन गरेर।
यो कथा अपमानजनक थियो तर यो विश्वासनीय थियो र यसले व्यक्तिहरूको ध्यान र कल्पनालाई समात्यो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, इभर्सको टीम माथिको र माथिको हो। यदि तपाईं सफल हुन लाग्नुभएको छ भने, तपाईंले अरूले गर्न नचाहेको कुरा गर्न इच्छुक हुनु आवश्यक छ। कुनै अनौंठो उच्च गुण बनाउनुहोस्। एक उल्लसित र अर्ध-विश्वास कहानी क्राफ्ट गर्नुहोस्। यथार्थको लागि समाधान नगर्नुहोस्। मार्केटिंगमा, क्रीम वास्तवमै माथि उठ्छ।
टैग: बिलबोर्ड छलhoaxचकमा मार्केटिंगivarsivars बिलबोर्ड होक्सivars चाउडर
बजार र मेसिन शिक्षा: द्रुत, चलाख, अधिक प्रभावशाली